Maibahoaka Ivato : Miatrika fiofanana ireo delegen’ny serasera -
AccueilSongandinaMaibahoaka Ivato : Miatrika fiofanana ireo delegen’ny serasera
Nanomboka omaly ary hifarana ny 15 marsa izao. Miatrika fiofanana eny amin’ny ivon-toerana fampianarana sy fampiofanana momba ny haino aman-jery (CEFOM) eny Maibahoaka Ivato ireo delegen’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana isan-tokony. Ankoatra ireo delege avy amin’ny distrika 11, dia miatrika izany fiofanana izany ihany koa ireo lehiben’ny sampandraharaha sy lehiben’ny fandaharana avy amin’ny faritra 22 eto Madagasikara. Lohahevitra dimy no hifantohan’ny fiofanana mandritra ny befatr’andro amin’ny fanamafisana ny fahaiza-manao : ny teknikan’ny tafatafa, ny tatitra sy fanentanana, ny rafitra famokarana sy famoahana, ny rafitra ara-dalàna sy manara-dalàna mifehy ny asa momba ny fifandraisana, ny fitsipika mifehy ny fifandraisana sy ny fitantanam-panjakana, ary ny fifehezana ny fifandraisana amin’ireo andrim-panjakana. Ireo tompon’andraikitra ara-teknika avy amin’ny minisitera sy ireo manam-pahaizana avy any ivelany no mitondra ny fampiofanana. Tanjon’ny fiofanana ny fanatsarana ny haavon’ny fanatontosana, ny fikirakirana ary ny famokarana fampahalalam-baovao sy ny fandaharana atolotra amin’ny sehatra rehetra. Izany dia ao anatin’ny fampiasana ireo teknolojia vaovao, mamaly ny filan’ny ponina amin’ny ankapobeny ary indrindra ny any amin’ny faritra. Toa izany koa ny fanomezana ireo delege ny fahafaha-manao, ny fahafahana mamantatra sy mamokatra ny serasera manara-drafitra araka ny filàn’ny faritra sy / na ny firenena. Toa izany koa ny fampahafantarana ireo mpisehatra any amin’ny faritra amin’ny serasera ireo lalàna mifehy ny fifandraisana, ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra amin’ny lafin’ny fanoratana, ary amin’ny fampivoarana ny tetikasa mahomby momba ny fampifandraisana ireo asa iraisan’ny andrim-panjakana.
Tontosa omaly teny amin’ny CEFOM teny Maibahoaka Ivato ny fanokafana izany fiofanana izany, izay notronin’ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, Harry Laurent Rahajason. Nomarihiny fa ity fiofanana ity dia natao indrindra hanatsara ireo tolotra momba ny sersasera amin’ny sokajy rehefa sy fanolorana ho an’ny mpanjifa fampahalalam-baovao mendrika.